Jennifer Golden Zvinyorwa pa Martech Zone |
Zvinyorwa na Jennifer Golden
Jennifer Golden ndiye director wemakambani ekushambadzira ane basa repasi rose rekushambadzira zano uye kuuraya pa MRP. Jennifer anounza ruzivo rwakadzama mukubatanidza data, ruzivo uye zviito kuita kuti mutengi aonekwe. Asati aita MRP, akashanda semuongorori wekushambadzira uye wekumaka uye akabata hutungamiriri hwekushambadzira kuAcxiom, Rigzone nevamwe.
3-D Account-Yakavakirwa Kushambadzira (ABM): Maitiro ekuunza Yako B2B Kushambadzira kuHupenyu
Muvhuro, October 25, 2021 Muvhuro, October 25, 2021 Jennifer Golden
Sezvo isu tichiwedzera kuita basa redu uye hupenyu hwepachedu pamhepo, hukama hweB2B nekubatanidza zvakapinda muchikamu chitsva chehybrid. Account-Based Marketing (ABM) inogona kubatsira kutumira mameseji akakodzera mukati mekuchinja kwemamiriro nenzvimbo - asi chete kana makambani akafananidza kuomarara kwepabasa nehukuru hutsva hwetekinoroji inobata data remhando, fungidziro yekufungidzira, uye chaiyo-nguva synergies. Yakakonzerwa neCOVID-19 denda, makambani kutenderera pasirese akafungazve hurongwa hwekushanda huri kure. Vanosvika hafu yemakambani